Soosaarka iPhone 13 waxaa hoos u dhigi doona dhibaatooyinka yaraanta qaybaha | Wararka IPhone
Soo saarista iPhone 13 waa la dhimi doonaa dhibaatooyinka yaraanta qaybaha
Markii hore, wax walbaa waxay tilmaameen in Apple aysan wax dhibaato ah ku qabin soo saarista iPhone 13 in kasta oo ay yaraadeen qaybaha. Hadda warbaahinta caanka ah ee Bloomberg ayaa tilmaamaysa in Cupertino lagu qasbay hoos u dhig heerka wax soo saarka ee iPhones -kan Dabcan hoos u dhaca wax -soo -saarku wuxuu saamayn doonaa iibkii markii hore la qorsheeyay.
Waxaa la filayay inuu gaaro 10 milyan oo iPhone 13 ah oo la iibiyey sannadkan laakiin tiradaasi way dhici kartaa si aad ah loo yareeyo sababtoo ah yaraanta semiconductors. Markii soo -saarka moodooyinkaan iPhone 13 la bilaabay, waxaa la filayay inay soo saarto ilaa 90 milyan, hadda dhibaatooyinka Broadcom iyo Texas Instruments tiradaasi way yaraan doontaa.
Tani waa mid la dareemi karo taariikhaha bixinta alaabtaada
Markaan galno websaydhka Apple waxaan garwaaqsanaa marka aan dalbanayno nooc cusub oo iPhone 13 ah ama xitaa taxanaha cusub ee Apple Watch 7, taariikhaha dhalmadu waxay dhaafaan hal bil xaaladaha qaarkood. Tani ma ahayn wixii caadiga ahaa ee soosaarayaasha Apple, in kasta oo ay run tahay bilowga iibka waxaad mar walba arki kartaa kayd la'aan. Xaaladdan oo kale waxaa sabab u ah dhibaatooyinka qaybaha iyo tusaalaha cad waa waxa aan ku aragno warshadaha baabuurta, kuwaas oo xitaa aad uga xanuunsanaya shirkadaha ku jira qaybta farsamada sida Apple.
Bilowgii waxaa laga sheegay Bloomberg in Apple ay xitaa kordhin karto wax soo saarka iPhone 20 13% marka la barbar dhigo iPhone 12 sii daayay sannadkii hore. Hadda waxay umuuqataa in xogtu aysan si sax ah u tilmaamin kororka wax soo saarka, Taas bedelkeed Waan arki doonaa sida ay taasi u saamayso iibinta aaladda muddada dhow iyo muddada fog.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Soo saarista iPhone 13 waa la dhimi doonaa dhibaatooyinka yaraanta qaybaha
10ka astaamood ee ugu hooseeya ee ku jira iOS 15 [VIDEO]
watchOS 8.0.1 ayaa sidoo kale diyaar u ah soo dejinta